HALATRA VOLA TAMINA BANKY : Sarona tany Mahajanga ilay vahiny tompon’antoka
Ny alatsinainy lasa teo no saron’ny zandary tao an-tampon-tanànan’i Mahajanga ilay teratany frantsay manodidina ny 32 taona, tompon’antoka tamin’ny fisintomana vola tamin’ny “gab” bmoi teto an-drenivohitra, izay tamin’ny alalan’ny karatra tsy ara-dalàna. 12 janvier 2019
Tsy nampoizin’ ity farany ny nahatratra azy ary fomba fiady izay tsy dia fahita loatra teto Madagasikara rahateo koa. Araka ny fanazavana voaray bebe kokoa momba ny zava-nisy dia nandritra ny tontolo andron’ny 4 janoary lasa iny ity farany no nanatanteraka izany ka vola mitentina 113 tapitrisa ariary no voasintony nanomboka tamin’ny dimy ora maraina ka hatramin’ny dimy ora hariva.
Manana ireo karazana « carte bancaire » ity farany, izay tsy miasa eto Madagasikara ka ireny no nentiny nampiasaina tamin’ireny gab ireny nisarihana vola. Karatra maherin’ny zato no nampiasainy tamin’izany ary in-162 nisintona ireo volabe ireo izy. Efa voasambotra ity nahavanon-doza ity ka mbola atao famotorana lalina ny mombamomba azy iray manontolo.